Qabowga Qaarada Yurub oo Daraasiin Dad ah laayay – SBC
Qabowga Qaarada Yurub oo Daraasiin Dad ah laayay
Wararka laga helayo Bariga iyo Bartahama Qaarada yurub ayaa ku waramaya in ku dhawaad 60 qof ay qabow dartiis ugu dhinteen wadamo ka mid ah Yurub kuwaasi oo maalmihii u danbeeyay uu ka jiray Qabow Daran.
Qabowga xilligan ka jira Qaar ka mid ah Magaalooyinka Qaarada Yurub ayaa ah mid heerkiisu uu gaaray -20 Degree kaasi oo ah mid aad u qabow qatarna gelin kara Nolosha Dad badan oo aan qabowga xamili Karin.
30 qof oo ka mid ah dadka qabowga dartiis u geeriyooday ayaa ku dhintay Wadamada Ukraine, Poland, Romania, Bulgaria iyo wadamo kale kuwaasi oo inta badan uu ka jiro Qabowgii ugu darnaa ee Dalalkaas soo mara
Saraakiisha Dowlada Ukraine ayaa sheegay In dadka ugu badan ee nolosha ku wayay qabowga ay yihiin dadka aan guryaha ku lahayn wadankasi Waxaana Dowladu ay iminka biloowday in si degdeg ah dadkaas loogu dhiso Dhismayaal.
Wadamada uu qabowga daran ka jiro ayaa iminka bilabay inay si degdeg ah ilaa Jimcaha Todobaadkan dhisaan Goobo ay dadka ka galaan qabowga kuwaasi oo dhisidooda iminka ay si degdega ah u socoto.
Laamaha Caafimaadka ee wadanka Ukraine ayaa sheegtay in 24,000 oo qof ay u bahaan yihiin xilligan gobo ay ka galaan qabowga iyadoona 600 in ku dhowna lala tacaalayo xaaladooda caafimaad ka dib marki uu qabowga waxyeelo soo gaarsiiyay.